Baakadaha Express ee ugu fiican iyo soo saaraha mashiinka calaamadaynta | UBL
Waxaa inta badan loo adeegsadaa baakadaha baakadaha, baakadaha waraaqaha, sanduuqyada cawl, baakadaha maro iyo alaabada kale ee ganacsiga, boostada, tareenka, bangiyada, cuntada, daawada, buugaagta iyo warshadaha qaybinta xilliyeedka.
Badeecadani waa badeecad shati leh oo ah mashiinka xarkaha wax-garadka ee caqliga leh oo ay si madaxbannaan u soo saartay shirkadeena, oo si gaar ah loogu talagalay dadka adeegsada saadka e-commerce. Mashiinka oo dhan wuxuu ku saleysan yahay kumbuyuutar gacanta ku haya warshadaha oo heer sare ah, wuxuuna bixiyaa xalal isku dhafan sida iskaanka otomaatiga ah, miisaamida otomaatiga ah, filimka wax lagu xirayo, daabacaad otomaatig ah, iyo si toos ah u dhejinta dhejinta. Isla mar ahaantaana, waxaan bixin karnaa nidaamka ERP ee guud iyo nidaamka WMS iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Waxaan bixinnaa xalka guud ee dhoofinta baakadaha alaabada filimka caagga ah ee macaamiisha.
Ka dib marka la geliyo cajaladda xirxirida, mashiinku wuxuu si otomaatig ah u dhammaystiri karaa geedi -socodka qabashada cajaladda ururinta, xiridda kuleylka, goynta iyo furitaanka cajaladda.
Xawaaraha shaqayntu waa dhakhso, hufnaan sare, waqti - iyo badbaadin shaqaale, tayada xirashaduna waa sarraysaa Si loo hubiyo in xidhmadu aanay ku kala firdhin gaadiidka iyo kaydinta sababtuna tahay xiritaanka ma aha mid adag, laakiin sidoo kale waa in si fiican loo xidhaa oo qurux badan.
1. Si looga hortago in ay dhacdo xaashida amarka degdegga ah, macluumaadka xaashida wejiga waxaa si otomaatig ah u soo saaray nidaamka oo si otomaatig ah ayaa loo daabacay oo loo dhajiyay iyada oo aan la samayn faragelin gacanta ah.
2. Hal qof oo kaliya ayaa shaqayn kara, 1100 jawaan ayaa la buuxin karaa saacaddiiba.
3. U isticmaal farsamada si wax ku ool ah u tirtirto halisaha aan caadiga ahayn, u shaqayso si habsami leh oo la isku hallayn karo, kor loogu qaado hufnaanta shaqada.
4. qanjaruufo ka-hortag, gubasho ka-hortag, ka-hortag-xumo, ammaan ah in la isticmaalo.
5. Xidhmada xariifka ah ee Smart waxaa lagu gaari karaa kaliya 1.5 mitir oo laba jibbaaran.
Duubista filimka PE: dhexroor MAX300mm, dhumucda filimka 0.05-0.1mm, ballaca filimka MAX700mm
Cabbirka dalabka Express
Ballaca MAX100mm, dhererka MIN100mm.180mm, ama caadadii la sameeyay
1100 xirmo / saacad
Mouse, Shaashadda taabashada, kiiboodhka dalwaddii
AC220V, Awooda 50/60Hz: 1.5kW
Dhererka: 1580mm Ballaca: 850mm Dhererka: 1420mm
1. Ha soo dirin suunka, soo dir suunku ma yaallo badiyaa tayada suunka xirxiradu ma toosna, suunka xirxirku aad ayuu u jilicsan yahay, dir suunka waqtiga aad buu u gaaban yahay, suunka kaydinta xirxirida kuma filna, sixitaanka farqiga ma jiro.
2. Cajalad aan dhegdheg lahayn, cajalad aan dhejinayn waxaa inta badan sabab u ah waxyaabo badan oo dib loo warshadeeyay oo ku jira suunka xirxirida, hagaajinta aan habboonayn ee heerkulka madaxa kululaynta, booska khaldan ee mindida sare ee dhexe, hagaajinta aan habboonayn ee dhejinta dhejinta.
3. Xiriirka dhegta waxaa ugu wacan xulashada aan habboonayn ee suunka xirxirida oo leh jeexdinta iyo suunka xirxirida, iyo hagaajinta aan habboonayn ee xadka suunka dambe.
4. Baakaduhu macno malahan waa hagaajinta cidhiidhiga suunka ayaa ah mid aan habboonayn, mindida xoogga wax lagu xirayo ayaa xidhan.
Hore: Mashiinka calaamadeynta dhalada ee labada dhinac ee Semi-automatic ah
Xiga: Laabista Tuwaalka otomaatiga ah iyo mashiinka xirxirida
Calaamadiyaha Dhalada Khamriga, Calaamadiyaha Dhalada, Labeller Dhalo, Mashiinka Xirmada Dharka, Mashiinka Calaamadinta Dhalada, Calaamadiyaha Dhalada Beerka,